Ngaba iNzululwazi yeNtengiso okanye ubuGcisa? | Martech Zone
Ngaba iNzululwazi yeNtengiso okanye ubuGcisa?
NgoLwesithathu, Septemba 18, 2013 NgoLwesibini, Septemba 17, 2013 Douglas Karr
Lo ngumbuzo omkhulu kangangokuba ndigqibe kwelokuba ndiwubeke kwiingcali ezimbini endizaziyo ukuba zisebenza namasebe aphambili okuthengisa yonke imihla. UMthetho oYilwayo Caskey ka Uqeqesho lweNtengiso yeCaskey yingcali eyaziwayo kwezentengiso kunye nomqeqeshi kunye no-Isaac Pellerin we Ibhokisi yeTinder - iqonga lesiphakamiso sentengiso eliqhume ekukhuleni. Zombini ngabaxhasi!
Ukusuka kuIsake: Ubugcisa beNtengiso
Ndaye ndaya kwikonsathi kule veki ukuya kubona uMamford noNyana besenza umboniso onamandla. Aba bafana bacula iingoma ezifanayo ubusuku emva kobusuku, banesibane esifanayo nesihlwele, kwaye basebenzise iziqhulo ezifanayo, kodwa ngandlela thile bayakwazi ukwenza ngendlela eyenza ukuba abaphulaphuli bazive ngathi le yeyona ndawo bayithandayo kukhenketho. Kukho imiba yekonsathi eyinzululwazi elula kwaye xa izinto zidibana ngenjongo, bubugcisa.
Ndiyakholelwa ukuba olu nxibelelwano kunye nokuthengisa. Kufuneka izive njengobugcisa ngelixa ihleli isezinzulu, into endiyibiza ngokuba yi "Calculated Spontaneity". Kuya kufuneka uqonde abaphulaphuli bakho kwaye wazi ukuba uyaphi ngelixa usabela kwiimfuno zabo njengoko ufumana ingxelo kuyo yonke inkqubo yokuthenga.
Yintoni eyahlula ubugcisa kwisayensi yinjongo. Kukho imithetho yesayensi elawula inkqubo yentengiso. Njengenani lamathemba ekufuneka uwafowunele ukufumana izikhokelo ngubani oza kuguqula amathuba, okanye ukuba kufuneka ulandele ngokukhawuleza kangakanani izikhokelo ezingenayo ngaphambi kokuba ziye kubanda. Kanye njengokuba umhlaba ujikeleza kwi-axis yawo wenza ipateni yokuphuma nokutshona kwelanga, ezi zinto kufuneka zenzeke ngokungaguquguquki okungapheliyo ukugcina i-injini yengeniso isebenza.
Umthengisi olungileyo uyayiqonda inzululwazi emva kwezi ndlela zokuziphatha. Umthengisi omkhulu wentengiso uyazi indlela yokuhambisa umyalezo kwithemba ngendlela evakalelwa ukuba yenzelwe eyahlukileyo. Bayayazi indlela yokusebenzisa i-Intel eqokelelwe kwinkqubo yesayensi ukwenza amava okuthenga awenzelwe wena. Ukuthengisa okukhulu kunokuphakanyiselwa kwifomu yobugcisa (ngakumbi ubugcisa bokusebenza) xa imithetho yezenzululwazi elawula indawo yakho yokuthengisa iqondwa kakuhle ukuze i-nuance ingeniswe kwintsebenzo nganye eya kothusa kwaye ivuyise ithemba lakho ..
Ukusuka kwiBhili: iNzululwazi yeNtengiso
Abantu abathengisa kakhulu bafana neembaleki zeOlimpiki: Baqhuba umgama wokuziqhelanisa neekhilomitha ngaphambi kogqatso. Abazange baphume nje baye kukhuphisana. Ngomhla wokhuphiswano, bakulungele, ngokwengqondo nangokomzimba. Ngokwesiqhelo, abantu abathengisayo bayala ukwenza izinto eziphambili eziyimfuneko ukuze baphumelele. Kungenxa yoko le nto ingeniso kulomsebenzi iphezulu kakhulu. Inzululwazi yokuthengisa ilungiselela ukukhuphisana. Ubugcisa kukuqonda kwendalo yomntu wakuba usemdlalweni.
Ukufumana ezinye iingcebiso zeengcali kunye nohlalutyo olunzulu kwezinye zeendlela zokuthengisa zobugcisa kunye nezenzululwazi, unokuzikhuphelela incwadi yamvanje yeVelocify- Ukubetha ibhalansi egqibeleleyo phakathi kobugcisa kunye nesayensi.
tags: ubugcisa bokuthengisaUkunika amandla ukuthengisainzululwazi yentengiso
I-UserVoice: Ingxelo, isicelo seNqaku kunye nokuKhangelwa kweBug kwenziwa ngokuLula!
Sep 18, 2013 ngo-1:38 PM
Nabani na unokuthatha imibala emithathu ephambili kwaye enze imibala yesibini, kodwa ligcisa kuphela elinokuyijika libe yincutshe ekufanele ijongwe kwaye inika umdla, nangona abanye beyijonga njengobugcisa, abanye basenokungayiboni.